Iindlela ezi-3 zokuphucula amava aVenkile ... kunye neRhafu | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 20, 2015 NgoMvulo, Oktobha 19, 2015 Douglas Karr
Kule mpelaveki bendiyokuthenga kuyo entsha Indawo yentengiso yaseKroger. Inqaku elisecaleni… ukuba nguKroger kuphela ocinga ukuba ukutyala imali kubukho babo kwi-Intanethi bekubalulekile njengobukho babo kwintengiso. Ndiyaphuma. Indawo yentengiso entsha yakhiwa ngaphaya kwesitalato ukusuka eKroger yangaphambili. Inyathelo elinye ngaphakathi kwaye uyabona ukuba kutheni.
Indawo yokubhaka enesonka esitsha soMsebenzi, idizayini enekhawuntari ye-gourmet yesonka, i-Starbucks, ikhawuntari ye-sushi, kunye nokuyeka ukuthenga abantwana, iithoyi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, ijewelers kunye nekhitshi. Kwaye kwafumana indawo yokutya kunye neholide. Le venkile enkulu inakho konke. Okanye ngaba kunjalo?
Njengoko bendihamba evenkileni ndikhangela isepha yokuhlamba impahla, ndiye ndabona ukusebenza ngokukuko. Isitshixo esinye kukuba icandelo ngqo phambi kokuphuma lifana nevenkile ngaphakathi kwivenkile. Ngaba kufuneka uthabathe ubisi kunye nemifuno emitsha (nokuba ikhulile kwalapha ekhaya)? Ungangena kwaye uphume kwimizuzu embalwa. Uhambo lwam luthathe iiyure ezimbalwa njengoko bendifunda kwikona nganye yevenkile.
Ukufumana isepha yokuhlamba iimpahla, kuye kwafuneka ndijonge phezulu kumqondiso okhomba kwindlela engu-48. Ndabuyela kulaa kona yevenkile, ndathatha iTide yam, ndahamba umjikelezo… apho zonke izinto ezisempilweni nezintsha. ngu. Ndabamba i-Starbucks, ndathatha ikhefu, emva koko ndakhangela.
Amava evenkile anezinto ezibini kwisithathu zendlela yokugqibelela. Le infographic evela Moki isekwe kwiForrester Ixesha elizayo leVenkile yedijithali. Ikhomba indlela kwezi zitshixo zintathu zikhona kumava akhethekileyo ezivenkileni:
Umxholo -Ndicinga ukuba la macandelo matsha afezekile. Kukho iWal-mart kwelinye icala lendlela, kodwa ngokuba ivenkile yokutya nezinye izinto, uKroger wanikezela ngokukhetha ngakumbi usapho. Inyaniso yokuba ndingathatha ikhandlela elitsha, i-bourbon ephezulu, okanye ipani yokupanda ibonisa ukuba uKroger uyabaqonda abathengi bayo.
Iyasebenza -Amacandelo onyaka kunye nokulungeleka ayamnandi. Bendihlala ndikuphepha ukuya kwi-Kroger endala ndiyokuthatha i-cream creamer kuba ifuna uhambo oluya kwivenkile yonke kuthengwe into enye. Ndiza kuya kwivenkile elula yendawo endaweni yoko. Ngoku ndingaya eKroger ndiyokuthatha imifuno emitsha, nayo!
iyeyakho - Kulapho kukho ithuba lokuba uKroger andise amava abo asesitolo. Ukuba banonxibelelwano lwentsimi ekufutshane kuphela ngaphakathi kwisicelo sabo esiphathwayo, mhlawumbi ezinye beacons ezivenkileni, kunye nemiboniso ethile enamandla endaweni yeetafile zezendlela ezindala zesikolo, bendinokungonwabi ngenxa yazo zonke izindlu nomhlaba. Kwaye, ukuba iKhadi lam eliDibeneyo libhalisiwe, banokundenzela izibonelelo ngelixa ndihamba evenkileni.
Into emnandi kukuba ivenkile ayifuni ukuphinda ihlengahlengiswe- yindawo yokugcina ivenkile. Ngokwam, ndingathanda ukubona izitulo ezitofotofo kunye neesofa ezifafazwe kuyo yonke ivenkile. Okukhona abantu bejinga ngaphandle - kokukhona bacinga ngento ekufuneka beyithengile. Ndimise e-Starbucks emva koko ndahamba ndayokuthatha ezinye izinto ezilishumi elinambini.
UKroger unokuxhamla ngokunyusa itekhnoloji esetyenzisiweyo ngaphakathi kuyo. Ndathi xa ndijonga, umfazi osemva kwam wakhamisa ukuba ndinenqwelo encinci efikelela kwisambuku semali. Khange ayibone iMahi, iWoodford Reserve, kunye neSandwoodwood iribhoni yamakhandlela endiwathengileyo. Ndisebenzise imali ephindwe kabini kunale bendiyilindele.
Ndiyacinga nje ukuba ngendichithe ntoni ukuba uhambo lwam belukhona ezenziwe!
tags: Ivenkileamava esitolokrogerIndawo yemarike yase krogerIvenkileamava okuthengisaivenkile